"संघीयताको अभ्यासले विकासमा समय लाग्ने भयो–सभामुख महरा"
ओयो होटलले कसरी काम गर्छ र नेपालमा कस्ता सेवा दिइरहेको छ ?
ओयो प्रविधिद्वारा संचालित होटल सेवा हो । यसले साना–साना होटलहरुसँग सहकार्य गरेर इन्ड टु इन्ड टेक्नोलोजीको साथै अतिथीहरुलाई सत्कार गर्न एउटा ब्राण्ड बनाइदिएका छौँ। ओयो मार्फत उनीहरुले सस्तो दरमा स्तरीय आवास, खाना र अन्य आधुनिक सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ। यसले होटलमा ग्राहकहरुले छुट्टै आनन्दको महशुस गरेका छन्।
ओयोसँग साझेदारी गर्र्न होटलहरुले के–कस्ता शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ ? नेपालका सबै होटलहरु ओयोलाई आकर्षण गर्न योग्य छन्?
केही तत्वहरु आलोचनामै सुत्छन्, आलोचनामै ब्युँझन्छन् केही तत्वहरु आलोचनामै सुत्छन्, आलोचनामै ब्युँझन्छन्’
केही तत्वहरु आलोचनामै सुत्छन्, आलोचनामै ब्युँझन्छन्’
माया नै धर्म हो, शक्ति हो अनि शान्ति पनि - सुनिता राना
राजनीतिज्ञलाई श्रीमतीको पत्र - रौनक न्यौपाने
प्रदेश ५ सफा प्रदेश बनाउने अभियानकाे सुरुवात दशरथ घिमिरे - सुदिप उलक
माया नै धर्म हो, शक्ति हो अनि शान्ति पनि - रोहन योगी
ठूटो धरहरामुनि तिम्रो सम्झनामा गुलाफको थुँगा - केन्द्र रेग्मी